Ama-Paladins Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Ama-paladin angakhiwa abe ngumdlalo obewufuna kakhulu, konke okumele ukwenze ukunika amandla ama-Paladins Accento Hack ethu. Nge-Aimbot, i-ESP, neWallhack, le nkohliso ikwenza konke!
Usuvele uthenge iHaladins Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-Paladins hacks ethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma lisaxhumekile ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu Paladins Hacks
Ama-Paladins Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks nokuningi
Thenga Paladins Hacks in 4 izinyathelo
Khetha ama-hacks afanele izidingo zakho kangcono (i-Aimbot, i-Wall, i-ESP, njll.) YamaPaladins
Khokhela ukhiye wakho womkhiqizo usebenzisa uhlelo lwethu lokukhokha oluphephile nolukhethekile oluyi-100%
Thola ukufinyelela ku-Paladins Accento ngokhiye womkhiqizo bese ulanda ukukopela namuhla!
Kungani ama-Gamepron Paladins hacks?
IPaladins ngumdlalo ozoncika kumsebenzisi ezintweni eziningi, obeka amandla ezandleni zakho ingxenye enkulu. Ungaba nempumelelo enkulu uma ungakopeli, kepha lokho kuphela uma uzimisele ukubeka isikhathi esidingekayo - uma uke wahlangabezana nomdlali osezingeni eliphezulu wePaladins, uzobona ukuthi kuningi kakhulu iphucuziwe kune-gamer yakho emaphakathi. Kungakho ukusebenzisa iPaladins Accento kuzobaluleke kakhulu empumelelweni yabanye abantu, ngoba ayikho indlela ongancintisana ngayo nabadlali asebefunde ubunzima bePaladins iminyaka. Ukuzama ukuhambisana nabo ngaphandle kokusebenzisa amathuluzi kufana nokuzama ukushaya umsubathi wama-Olimpiki emdlalweni wabo, amathuba okuthi ulahlekelwe yi-99% yesikhathi.
Ungazishintshela ezibalweni ngokushesha okukhulu uma ukhetha ukusebenzisa iPaladins Accento, njengoba uzobona ukwanda okukhulu kwamathuba okuphumelela. Manje awusona nje isikhwama sokubhoboza abadlali abanesipiliyoni abangasishaya, ungancintisana nabo futhi uthole idumela lakho njengomdlali onekhono! Abadingi ukwazi ukuthi ubusebenzisa iPaladins Accento sonke lesi sikhathi kepha ungakhathazeki, sizokugcina kuyimfihlo phakathi kwethu sobabili!
IPaladins Accento yathuthukiswa ngomgomo owodwa engqondweni, futhi lokho kwakungukuguqula umdlali wakho ojwayelekile wePaladins abe ngumhlaba wonke, upondo wompetha wepondo. Akekho umuntu oyonamathela emizamweni yakho ngenkathi edlala, njengoba amathuluzi azokwenzela wonke umsebenzi onzima; izikhathi lapho bekufanele wenze khona konke ngokwakho sezihambile. Ngenkathi abanye bethi kuthatha ubumnandi ngaphandle kwesibalo, ukusebenzisa iPaladins Accento ukuthola ukunqoba cishe kuwo wonke umdlalo owodwa kuzwakala njengesikhathi esihle kithi lapha eGamepron. Sekuyisikhathi lapho ubeka khona imizamo yakho emihle phambili, akunjalo?
Ngabe ufuna ukuthenga ukugenca kwePaladins ukuze uzisebenzise? Uma ungakaze ugqekeze esikhathini esedlule, asikho isidingo sokwethuka - senze wonke amathuluzi ethu asebenziseka kalula ngendlela elula, kuze kufike lapho nabasebenzisi bethu abangenalwazi khona bezokwazi ukuzuza. Hlanganisa umdlalo wakho wokukhuluma udoti, ngoba uma usunike amandla iPaladins Accento, ukubulala (nokunqoba) kuzoqala ukugcwala ngaphezulu komunye nomunye ngaphandle kwesikhathi.
Imidlalo ye-Battle Royale ibonakala ingenakwenzeka ukubaleka kulezi zinsuku, ngoba kuzobe kukhona esinye isihloko esizokhishwa ezinyangeni ezizayo. Yize lokho kuliqiniso, mincane kakhulu imidlalo ezosondela kukhwalithi enikezwa ku-Fortnite; yingakho umdlalo uhlala uthandwa kangaka namuhla, futhi futhi yingakho sikwenze kwaba inhloso yethu ukusiza abantu ngezidingo zabo zeHacknite hack. Udinga ukunemba kokukhomba nolwazi olubanzi lomdlalo ukuthola iVictory Royale, futhi ama-hacks ethu ama-Fortnite azokusiza ukufeze lokho kalula. Awukwazi ukushiya ukuphepha kwe-akhawunti yakho kuze kube sethubeni ngokusebenzisa ama-hacks asezingeni eliphansi anganikeli ngokuvikelwa kokukopela, futhi ne-Gamepron inikeza ukuvikelwa okushiwo ngamanani amaningi.
Ngeke kusadingeka uchithe amahora phambi kwesikrini sekhompyutha yakho uzijwayeza, ngoba lokho kungcono kakhulu ukushiya kulabo abafuna ukuncintisana emincintiswaneni yobuchwepheshe ngokusemthethweni. Noma kunjalo kunabadlali abaningi be-pro abakopela indlela yabo ngokusebenzisa imiqhudelwano ye-Fortnite! Uma ugula futhi ukhathele ukudilizwa online, ukusebenzisa ama-hacks ethu ama-Fortnite kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokusondela ekuwineni iningi lemidlalo yakho.
Ama-hacks angama-Fortnite enza yonke inqubo yokudlala umentshisi ibe lula, kungakhathalekile ukuthi “izithukuthuku” ezingaki ezingena endaweni yakho yokwamukela izivakashi. Akunandlela yokuthi bangafanisa izinga lakho lekhono ngenkathi basebenzisa ama-hacks ethu ama-Fortnite, okuwukuphela kwendlela yokuhlala uncintisana ngokuzikhohlisa.
Ukugenca kwethu i-Fortnite kufaka inqwaba yezici ezahlukahlukene ongazuza kuzo, futhi yingakho ama-gamers emhlabeni wonke ethembele kwi-Gamepron ukuyigcina incintisana.
Ama-hacks ethu wonke ayatholakala ngentengo eyodwa ephansi, ngokungafani nabanye abahlinzeki abazosenga amakhasimende abo ngemali ngawo wonke amathuba angakhona.
IPaladins Wall Hack (ESP)
Imininingwane yePadadins Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
IPaladins Item ESP enezihlungi
Izixwayiso zesixwayiso sezitha zasePaladins
Imodi ye-Paladins super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza).
Paladins bone & aim ukhiye okulungisekayo.
IPaladins Buyisa isinxephezelo
Impela Paladins Hack Izici
IPaladins Player ESP
Noma yikuphi ukugenca kwePaladins okufanele inani lentengo kunikeze i-Player ESP. IPaladins Accento inezinhlobo eziningi zezinketho ze-ESP abasebenzisi bethu abazama ngazo!
Ukubona abadlali akwanele kwezinye izimo, okuyilapho umsebenzi wethu we-Player Information ESP uzoba yinto edingekayo.
Into i-ESP nayo ikhona ngaphakathi kokugenca kwethu kwePaladins, ikuvumela ukuthi ubone izinto eziwusizo nezinsiza ngokusebenzisa izindawo eziqinile / ezi-opaque ngaphandle komzabalazo.
IPaladins Accento Aimbot yethu inezici ezisezingeni eliphezulu, ekunikeza konke okudingekayo ukulawula ukwesaba kubaphikisi bakho. Ungalokothi ulahlekelwe esinye isibhamu!
Ithrekhi yePaladins Bullet (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Landelela izinhlamvu zakho bese ubona ukuthi isibhamu sakho besisebenza ngempumelelo kangakanani kusetshenziswa isici se-Bullet Track, esilungele izimpi zombili ezimfushane naphakathi naphakathi.
Paladins bone & aim ukhiye okulungisekayo
IPaladins Accento Aimbot iyakwazi ukuvumela abasebenzisi ukuthi balungiselele cishe noma isiphi isethingi, kusuka ku-Bone Prioritization kuye phansi ngosayizi we-FOV Circle yakho.
Ama-Paladins aimbot amasheke abonakalayo
Amasheke abonakalayo akunikeza inketho yokubona lapho izinhlamvu zakho zihlala khona futhi akwazise ukuthi ungakanani umonakalo owenziwayo kulitshe.
Yonke inhlamvu ibalwa ngenkathi idlala iPaladins, futhi isici seRecoil Compensation ngesinye sezimo lapho uzoba nethuba lokusebenzisa ngaphandle kwesikhathi.
Izitha zihlale zizama ukukucathamela, okwenza isici sePaladins Accento Warning sibe lusizo kakhulu!
Imodi ye-Paladins super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Ukuwa kwe-Fall ngeke kuqede umdlalo wakho ngaphambi kwesikhathi, njengoba ukwazi ukunika amandla i-Super Jump Mode futhi uvikele ukuthatha umonakalo wokuwa ngokuphelele.
Ufuna ukuba umdlali wePaladins ongcono? Awuwedwa, yingakho kungabonakala kuyimpi yokukhuphuka lapho uzama ukukhuphuka amarenki njalo. Kungenzeka ukuthi uke wadlula kwi-blender nasemuva, kepha manje ungathola impindiselo! Thenga ukhiye womkhiqizo wePaladins Accento namuhla bese uzizwa ukuthi kunjani ukuba yisando (hhayi isipikili) ukuze ushintshe.
Ama-Paladins Hacks adumile nama-Cheats
IPaladins ESP neWallhack
Amanye ama-Paladins Hacks nokukhohlisa
Ama-hacks nama-cheats athandwa kakhulu angatholakala khona lapha eGamepron, ngoba sizohlala sinikeza abasebenzisi bethu umkhiqizo omuhle kakhulu. Akunandaba ukuthi sikhulu kangakanani (noma sincane) isisekelo somdlali sanoma yimuphi umdlalo othile, sizokhipha amathuluzi amangalisayo ngakho konke ukukhishwa kwethu. Sisebenza ngokubambisana nabathuthukisi ukuqinisekisa ukuthi bafaka izici ezifanele kuma-Paladins hacks abo, kepha futhi sisebenza ukuqinisekisa ukuphepha kwabasebenzisi bethu kucatshangelwa. Ngeke silokothe ​​sigijimele omunye wozakwethu uma kuziwa ekuhlanganiseni ukukopela, futhi imiphumela iyazikhulumela - lapho umuntu efuna ukugqekeza ngempumelelo ePaladins, beza eGamepron!
Izikhohlisi ezithandwa kakhulu ePaladins kuzoba yiPaladins Aimbot, ESP / Wallhack, Warning, nezinye izici eziningi ezinikezwa ePaladins Accento. Kuyinto eyodwa ukukopela nge-hack esezingeni eliphansi, kepha ukusebenza ne-Gamepron kuzokukhombisa izindlela zangempela zobugebengu obuphambili!
Ukusebenzisa i-Paladins Accento Aimbot yethu kuqinisekisiwe ukuthi kuzothuthukisa isilinganiso sakho se-K / D (Kill vs. Death), kanye nephesenti lakho lokuwina. Labo abasadlala iPaladins bayazi ukuthi ngumdlalo wokuncintisana ogcwele abadlali abazama kanzima, yingakho kufanele uthathe izinto ngokungathi sína. Ukukuyekela ethubeni akulungile futhi kunokuhlukahluka okuningi okungadlala indima ekutheni isibhamu sakho sinembe kangakanani, kepha ukusebenzisa iPaladins Aimbot yethu kuzoqinisekisa ukuthi isibhamu sakho sihlala siyiqiniso kuwo wonke umdlalo. Akunandaba ukuthi kwenzekani eduze kwakho, noma nokuthi umataniswa nobani; ukusebenzisa iPaladins Aimbot yethu kuzovala ngisho nabadlali abasebenza izinto eziningi ePaladins.
Abadubuli babantu bokuqala bathembele kokufakwayo komsebenzisi ukuthola imiphumela efanele futhi ukusebenzisa amathuluzi ethu ukuba abe "nenhloso yerobhothi" kuzosiza kuphela. Zizwe amandla okugenca kwethu iPaladins Accento nazo zonke izinketho ezinhle ze-Aimbot esizifakile phakathi kwazo namuhla!
Ukusebenzisa i-Paladins Accento ESP ne-Wallhack kuzovumela abasebenzisi ukuthi baskene inkundla yempi futhi bathole imininingwane ebingaziwa ngenye indlela. Bheka indawo yezitha zakho ngokunika amandla inketho ye-Player ESP, engalungiswa ukuze ivumelane nezidingo zakho ngokuphelele. Yenza ukulungisa kumbala wamathambo omdlali, imiphumela ekhanyayo, noma i-2DBox usebenzisa imenyu engaphakathi kwegeyimu (eyenza ukulungiswa kwezimpukane kube nomoya). Ama-Campers azoba yinkinga enkulu ngenkathi edlala ama-Paladins, njengoba wonke umuntu ekhathazekile ngokuqothulwa kwama-noggins; kulapho i-Paladins Wallhack yethu izoshiya khona itshe futhi izodalula labo abacashe ezithunzini.
Uma ucabanga ukuthi othile usesakhiweni, vumela iPaladins Wallhack yethu ukuthi uzitholele ngokwakho! Ungabona futhi izinto eziwusizo / amandla-ups kusuka kude ngesici se-Item ESP, ekunikeza lonke ithuba lokuthola okuningi emidlalweni yakho. Lapho usebenzisa iPaladins Accento ESP yethu, ukunqoba kuzoba yinto ejwayelekile!
Isici seFootprint sicoceke ngendlela emangalisayo, ngoba iPaladins izonikeza labo abazimisele ukusebenza kanzima ngamathuba wokuwina. Uma une-Footprint inikwe amandla uzokwazi ukulandelela phansi izitha usebenzisa amathrekhi azo, kufana nomzingeli ongahlasela. Awusadlali nabantu abasezingeni lekhono elifanayo nawe, empeleni kuyiphathi lokuzingela ngaleso sikhathi! Ukulimala Okuphezulu kuvumela isibhamu sakho ukuthi senze umonakalo omkhulu kakhulu kunalokho ebesingakwenza njalo, ngoba ukulimala okuyisisekelo kwazo zonke izikhali zakho kuzozizwa kunamandla amakhulu.
Ukuqhekeka kwebanga akufanele kunganakwa nakho, ngoba ukugenca kwethu iPaladins Accento bekungeke kuphelele ngaphandle kwayo. Ungaletha i-Footprint, i-High Damage kanye ne-Distance hacks ndawonye ukuze udale enye yama-Paladin Hacks anamandla kakhulu owake wahlangana nawo! Kubukeka sengathi ukulahlekelwa akuseyona inketho lapho zonke lezi zici zinikwe amandla.
IPaladins Accento inezinye izinketho eziningi ezenza kube ukugenca okuholayo kwePaladins okutholakala online, okulungile kuphela. Kufanele unikeze inhlonipho lapho kufanele khona, futhi iqembu lokuthuthukisa iPaladins Accento alizange lisike noma yiliphi leli! Umbuthano we-FOV ofakwe ngaphakathi kwePaladins Aimbot uzokhomba ngokuzenzakalela noma ngubani ohamba aye kuleyo ndawo (engalungiswa ngosayizi), futhi ungabona nokubikezela kwejubane / ukwehla kwezinhlamvu kuwo wonke amashothi wakho. Leli thuluzi lilungele bonke abadlali beqembu nabadlali bodwa, ngoba zonke izici zingakusiza ukunqoba umncintiswano kungakhathalekile
balunge kangakanani ozakwenu. I-Smooth Control isetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi i-gameplay yakho ayibukeki i-jittery noma ivele "njengomsolwa" kunoma ngubani omunye umuntu osebenzisa iseva futhi!
Amakhohlisi alobu bukhulu ngokuvamile anzima ukuwathola, ikakhulukazi kumdlalo onjengePaladins, kepha iGamepron izoqhubeka nokunikeza abasebenzisi bethu izinkohliso ezithembekile (futhi ezingabizi ngokuqhathaniswa).
Ama-Paladins Hacks Imibuzo
Kungani ama-Paladins ethu e-Hacks
Noma ungakucabanga ukuthenga ama-Paladins cheats wakho komunye umhlinzeki, yi-Gamepron kuphela ezokuletha maqondana nekhwalithi. Ubungeke uthande ukuchitha imali ngethuluzi elisebenza kancane, noma eligcina likwenza uvinjelwe - yingakho ukusebenzisa i-100% yethu ephephile nehlanzekile yeHaladins hack kuyindlela yakho engcono. Ungazihluphi ngamanye amathuluzi!
Kungani iPaladins yethu i-Aimbot
Shintsha indlela umdlalo oqhubeka ngayo ngokunika amandla iPaladins Accento Aimbot yethu, noma ngabe awuwuqalanga umdlalo nayo! Imenyu engaphakathi komdlalo yenza ukulungiswa kube lula ukukufeza, futhi ungasebenzisa le Paladins Aimbot ngaphandle kokubhekana nokuntuleka kwezici. Zonke izici ezidume kakhulu zifakiwe, kanye nezici eziningi ezingeziwe ezingatholwa ku-Gamepron kuphela.
Kungani iPaladins ESP yethu
Ukusebenzisa i-ESP efanele kungakuvulela eminye iminyango eminingi njengomdlali, njengoba ungasasebenzi ngokungaboni. Uzokwazi ukuthi yini elele ekhoneni ngalinye, njengoba isici se-ESP sizokunikeza amathambo nama-2DBox ukuthi ubheke - ungakhetha nokubona yonke into emdlalweni lapho unika amandla i-Paladins Accento Item ESP hack yethu!
Kungani iHaladins yethu yaseHallad Hack
Ama-Wallhacks abelokhu eyitshe legumbi embonini yokugenca isikhathi eside, njengoba kuzohlala kunezakhiwo lapho izitha zakho (nakanjani) zicasha khona. Ukusebenzisa iPaladins Accento Wallhack kungavimbela ukufa okungadingekile nemidlalo elahlekile ngenxa yamakhampasi, njengoba usengakwazi ukugcina isitayela sokudlala esinolaka futhi ukhiphe abantu abacashe kuyo yonke imephu; akukho lapho ungacasha khona manje!
Kungani i-Fortnite NoRecoil yethu
I-Recoil Compensation bekuyisicelo sama-Paladins hacks selokhu umdlalo wakhishwa, njengoba ukubuyisa kungashintsha umfutho wokuqhuma kwesibhamu khona manjalo. Yisuse ngokulanda i-Recoil Compensator yethu, njengoba nje uma inikwe amandla, awusoze wadinga ukubhekana nokubuyiswa futhi. Kwangathi inhloso yakho ingahlala iyiqiniso futhi ingadlidlizi!
Ungalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu ePaladins?
Ungalanda ama-Paladins hacks amahle kakhulu khona lapha eGamepron, futhi inqubo siyenze yaba lula kakhulu. Noma ungakaze ulande i-hack ngaphambili, awudingi ukucabangisisa ngenqubo ngokweqile. Konke kuzenzakalelayo ngokuphelele, njengoba ukufaka ngesandla ama-hacks akho kuyinto yesikhathi esedlule. Ungavele uthenge ukhiye wakho womkhiqizo bese uqala ukulanda ngokushesha, akukho mibuzo ebuzwayo.
Kungani ama-Paladins akho ebiza kakhulu kunamanye
Ama-hacks ethu ePaladins angahle abize kancane uma kuqhathaniswa nabanye abahlinzeki, kepha lokho kungenxa yokuthi sizokunikeza ulwazi oluhle kakhulu. Abanye abahlinzeki abakwazi ukusho okufanayo ngemikhiqizo yabo, yingakho beshibhile kakhulu; siphinde siqinisekise ukuthi i-akhawunti yakho izohlala iphephile ngo-100% ngenkathi usebenzisa amathuluzi we-Gamepron. Ama-akhawunti avinjelwe akuyona into ejwayelekile kulezi zingxenye!
Sinikeza imikhawulo yesikhathi esebenza kuwo wonke umuntu, ngoba akudingeki uzibophezele kumathuluzi ngokushesha. Ungabahlola ngesilingo sosuku olungu-1 noma seviki elingu-1, futhi uma uthanda okubonayo, ungakhetha ukuthenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1! Sizimisele ngokwengeziwe ukwamukela amakhasimende ngokusemandleni ethu lapha eGamepron.
Awesome Paladins Hack Izici